Dowladda Oo Kala Hadashay, Arrinta Duulimaadka Kismaayo – Goobjoog News
23-kii bishan ayeey ahayd markii shirkadaha duulimaadyada lagu wargeliyey in muddo Saddex cisho ah aanay wax duulimaad ah ka sameyn karin magaalada Kismaayo, kadib warqad ay ka heleen hay’adda duulista hawada dalka.
Hadaba waxaa soo baxay hadalkan hadal ka duwan, kadib markii isla hay’addaasi ay sheegtay in aanay jirinba warqad dhankeeda ka timid oo lagu xayirayo duulimaadyadii Kismaayo.
Axmed Macalin, maareeyaha hay’adda duulista hawada Soomaaliya ayaa sheegay in aanay jirin wararka sheegaya in la xanibay duulimaadyadii Kismaayo muddo Saddex cisho ah, balse wuuu tilmaamay in shirkadaha ku wargeliyeen oo kaliya iney hay’adda 24-saac kahor kusoo wargeliyaan duulimaadya ay ku aadayaan Kismaayo.
Maareeyaha ayaa sheegaya in hadalka ay ka maqleen oo kaliya warbaahinta, iyadoo xusid ay mudan tahay in shalay (24 September) uu dhaqan galay ammarkii xayiraadda lagu saaray duulimaadyada Kismaayo.
“Waxaan warbaahinta ka maqlayey in Kismaayo la xiray oo diyaaraduhu tagi karin, iyadoo la leeyahay illaa 26-ka bishan laga gaaryo diyaaraduhu tagi karin, waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed iney u sheego inaanay jirin wax si rasmi ah uga soo baxay dowladda Soomaaliya iyo hay’adda duulista rayidka Soomaaliyeed oo xadidaya diyaaradaha u duulaya Kismaayo, wax walbo waa caadi, waxa jira oo kaliya ammar kasoo baxay dowladda Soomaaliya oo ku amraya diyaaradahaasi in 24-saac kahor inta aanay aadin Kismaayo ay soo codsadaan fasax taasna waa caadi” ayuu yiri Axmed Macalin.
Boqolaal qof oo aadi lahaa Kismaayo iyo kuwo kusoo wajahnaa Muqdisho ayaa shalay la sheegay iney dib uga dhaceen safarkooda, xilli dowladda ay 23-kii bishan garoonka Aadan Cadde ku xayirtay madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed oo ku wajahnaa Kismaayo.